मारुती सुजुकी एस प्रेसो र टाटा टियागोमा कुन कार उत्कृष्ट ? | Automotive News Nepal
मारुती सुजुकी एस प्रेसो र टाटा टियागोमा कुन कार उत्कृष्ट ? ९ कार्तिक, २०७६
मारुती सुजुकीले हालै माइक्रो एसयूभी एस प्रेसोको बुकिङ खुला गरेको छ । सो कारको साथमा सुजुकी एक नयाँ सेगमेन्ट बनाउने तयारीमा लागेको छ ।
सानो ह्याचब्याकको डाइमेन्सन र एसयूभी जस्तो लुकको साथमा एस प्रेसो मारुती सुजुकी इन्डियन लाइन अपमा अल्टो भन्दा माथि हुनेछ । टाटाको कम्प्याक्ट ह्याचब्याक टियागोको परफर्मेन्स पनि उत्कृष्ट रहेको छ । अर्काे वर्ष सो कारको मिड लाइन अपडेट उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको छ ।
डाइमेन्सनको आधारमा टाटा टियागो ठूलो कार हो । टियागो भन्दा मारुती एस प्रेसो १८१ एमएम सानो र १२७ एमएम छोटो रहेको छ । साथै ह्विल बेस पनि सानो रहेको छ । टियागो भन्दा एस प्रेसोको उचाई २९ एमएम बढी रहेको छ । टियागोको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १७० एमएम र एस प्रेसोको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १८० एमएम रहेको छ ।
मारुतीको एस प्रेसो केवल पेट्रोल भेरिएन्टमा मात्र उलब्ध रहेको छ जबकि टियागो पेट्रोल र डिजेल भर्सनमा उपलब्ध रहेको छ । यो दुबै कारको पेट्रोलको तुलना गर्ने हो भने एस प्रेसोमा बीएस६ मानक पुरा गर्ने १.० लिटरको ३ सिलिन्डर इन्जिन जडान गरिएको छ । जसले ६८ पीएसको पावर र ९० एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । टाटा टियागोमा १.२ लिटरको ३ सिलिन्डर पेट्रोल इन्जिन जडान गरिएको छ । जसले ८५ पीएसको पावर र ११४ एनएमको पिक टर्क जेनेरेट गर्छ । टाटा टियागोलाई बीएस४ कम्प्लायन्ट इन्जिनको साथमा बीएस६ नम्र्स अनुसार अपडेट गर्न बाँकी छ । अर्काे वर्षको शुरुवातमा टियागो फेसलिफ्ट बीएस६ कम्प्लायन्ट इन्जिनको साथमा लन्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । यी दुबै कारमा ५ स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिसन र अप्सनल ५ स्पिड अटोमेटिक ट्रान्समिसन उपलब्ध रहेको छ ।
दुबै कारको ड्राइभर साइड एयरब्याग, ईबीडीको साथमा एबीएस, हाई स्पिड वार्निङ अलर्ट सिस्टम, फ्रन्ट सिट बेल्ट रिमाइन्डर र रिभर्स पार्किङ सेन्सर स्ट्यान्डर्ड समावेश गरिएको छ । मारुती एस प्रेसोमा एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटो कनेक्टिभिटीको साथमा ७ इन्च स्मार्टप्ले स्टुडियो टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम समावेश गरिएको छ । साथै माउटेन्ड अडियो कन्ट्रोल्सको साथमा मल्टि स्टेयरिङ ह्विल, किलेस इन्ट्रि राउण्ड सेपको डिजिटल स्पिडोमिटर रहेको छ । टाटा टियागोमा ७.० इन्च इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमको साथमा अपडेट गरेको छ । साथै यसमा डिजिटल इन्स्ट्रयुमेन्ट क्लस्टर पनि समावेश गरिएको छ ।
मारुती एस प्रेसोको शुरुवाती मूल्य २२ लाख ९९ हजार हुने बताइएको छ । यसको सबैभन्दा माथिल्लो भेरिएन्टको मूल्य २५ लाख ४९ हजार रहेको छ । टाटा टियागोको बेस भेरिएन्टको मूल्य २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसको टप भेरिएन्टको मूल्य ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ ।
भारतमा हालै एक मोटरसाइकल यात्रीले पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । उक्त पुस्तकको नाम...
पेरिस मोटर शोमा रेनोले आफ्नो विद्युतीय कन्सेप्ट कार के–जेडई सार्वजनिक गरेक...
काठमाडौं – नेपाल आयल निगमको घाटा बढेर एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । लगातार नाफ...